Tsena maizina - Wikipedia
Ny tsena maizina dia teny itononana ireo fivarotana ny entana ary raharaha amin’ny fomba tsy manara-dalàna, izay tsy manaja ny fandraiketana ny vidin’entana ary tsy mandoa ny hetra takian’ny governemanta amin’ny vidin’entana.
Noho ny endrika tsy maha-ara-dalàna ny entana varotana, dia voatery miasa any ivelan’ny tsena mazava izay tohanan’ny fanjakana ny tsena maizina.
Ny lentan’ny entana azo amin’ny fomba tsy ara-dalàna dia manana lentam-bidy roa :
Ny entana vidiana aamin’ny tsena maizina dia mora nohon’ny entana vidiana amin’ny tsena ofisialy. Tsy mandoa ny hetra ary ny vidim-panaovana ny mpivarotra entana. Ao amin’ny toe-karena ambanitany (économie souterraine) no ahitana izany. Mangalatra ny entana ny mpangalatra ary varotany amin’ny vidy ambany nohon’ny tokony ho vidiny ao amin’ny tsena ara-dalàna, fa tsy misy rosia, antoka, sns.
Mety lafo nohon’ny ao amin’ny tsena ofisialy ny vidiny. Sarotra vokarina ilay entana, na sarotra ny manana azy, ary mety mampidi-doza ny fitazomana azy na mety sarotra ny mahazo azy amin’ny fomba ara-dalàna. Raha tsy ara-dalàna ilay entana varotana (ohatra: zava-mahadomelona sasany) dia mety
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Tsena_maizina&oldid=617249"
Dernière modification le 13 Martsa 2013, à 08:33
Voaova farany tamin'ny 13 Martsa 2013 amin'ny 08:33 ity pejy ity.